Vidio ny toerana misy anao: fampiharana finday namboarina namboarina ho an'ny mpanjifa | Martech Zone
Alakamisy, Jolay 24, 2014 Alarobia, Jolay 23, 2014 Douglas Karr
Valisoa finday, fifanarahana finday, tapakila finday, mailaka… ireo fampiharana rehetra ireo dia manana endrika iray iraisana. Izy rehetra dia fampiharana manosika izay manelingelina ny mpanjifa tsy misy farany mba hampiasa ny fampiroboroboana voatosika ho azy ireo. Tsara ho an'ny mpanjifa sasany izany, saingy be ny mpanjifa te hanararaotra ny varotra rehefa vonona izy ireo. Izay ny hevitra ao ambadika Vidio ny toeranao.
Ankasitrahako ny paikady ao ambadik'ity fampiharana ity satria manome hery ny mpampiasa izy fa tsy ny sehatra na ny mpivarotra. Ny mpanjifa dia afaka miantso amin'ny alàlan'ny fikirakirana izay mpivarotra tadiavin'izy ireo hanaraka azy ary koa raha maniry izy ireo na rehefa maniry ny handray tolotra izy ireo. Ny tena tsara indrindra - tsy mila manonta tapakila, asehoy fotsiny ny tapakila finday amin'ny fizahana.
Ny mpivarotra dia mandoa vola isam-bolana fotsiny fa tsy mizara vola. Koa satria miditra ao amin'ny application Shop Your Spot ny fifanarahana nataonao, dia tsy mila manandrana handroaka ireo mpampiasa hisintona ianao ny fampiharana anao. Midika izany fa azonao atao ny miditra amin'ny mpampiasa Shop Your Spot rehetra… tsy ny olona atosika hisoratra anarana ihany. Niakatra ny sambo rehetra! Misintona fotsiny ny Miantsena ny fampiharana findainao Spot ary azony atao ny miditra amin'ny toerana fivarotana rehetra tiany sy ny fifanarahana arosony.
Ny mpivarotra dia afaka mitantana ny lisitr'ireo fifampiraharahana, manolotra azy ireo amin'ny fotoana tena izy, ary mizara fifanarahana vaovao eo noho eo nefa tsy mila fankatoavana na fanovana toa ny takian'ny sehatra hafa. Ary koa, ny mpivarotra dia afaka manara-maso ny fandrosoany rehetra Analytics mandrefy ny angon-drakitra momba ny zanabola sy ny fanavotana. Raha mpivarotra ianao ary te-hiantsena ny Shop Your Spot ho an'ny fitsapana - ampiharo eto.
Tags: efahatoerana-moninasarintanyfinday fampiharanatapakila findayfifanarahana findaytolotra findayfifanarahana akaikymiantsena ny toeranao